FORCE2019: Fananganana vina iraisana ho an'ny fanomanana - AfricaArXiv
navoakan'ny Jo Havemann on 18 ny Desambra 2019 18 ny Desambra 2019
Ity bilaogy ity dia niampita tampoka ASAPbio ary nampiasaina ambaniny CC-BY 4.0 fahazoan-dàlana. Azafady manampy azafady na fanamarihana momba ny lahatsoratra tany am-boalohany asapbio.org/force2019-preprints-vision-dinner.
Taorian'ny fifanakalozan-dresaka momba ny "Iza no hitaona ny fahombiazan'ny fanomanana amin'ny biolojia ary hatramin'ny farany?" FORCE2019 (namintina Eto), nanohy ny fifanakalozan-dresaka momba ny fiaraha-misakafo miaraka amin'ireo panelista sy mpiray tsikombakomba amin'ny vondrona hafa izahay:
Eo amin'ny latabatra 1:
Emmy Tsang (mpanamora), eLife
Theo Bloom, BMJ ary medRxiv
Andrea Chiarelli, Consulting momba ny fikarohana
Fiona Murphy, consultant mahaleo tena
Michael Parkin, Eoropa PMC, EMBL-EBI
Eo amin'ny latabatra 2:
Juan Pablo Alperin, ScholCommLab / Tetikasa Fahalalana momba ny famoahana boky
Humberto Debat, Institut teknolojia ara-pambolena (Arzantina)
Jo Havemann, AfricaArXiv
Lucia Loffreda, consulting fikarohana
Claire Rawlinson, BMJ ary medRxiv
Mba hamahana ireo olana somary mamitaka amin'ny maha-vondrona manana fomba fijery samihafa, dia noresahintsika ny fanambarana an-dehilahy dimy mamboly hoe ahoana ny mety ho fiomanana na tsia. Ny latabatr'i Emmy dia niresaka hoe:
Ny haavon'ny fanamarinam-baovao sy / na ny fandinihana ny mpiara-miasa izay efa nandalo dia tokony ho nampita tamina mangarahara rehefa tonga amin'ny fidirana eo amin'ny preprint
Tokony ho maimaimpoana foana amin'ny mpanoratra iray ny mametraka taratasy fanaingoana
Tsy tokony hampiasaina mialoha ny fahitana mialoha
Ireo mpizara an-tserasera dia tokony ho agnostika ho amin'ny fitaovana sy havoana sy paompy midina
Mandritra izany fotoana izany, ny latabatr'i Naomy (sary etsy ambony) dia niresaka hoe "tsy tokony hotohanan'ny mpamatsy vola sy mpanamboatra pôlitika ny mpizara fikarohana raha tsy hoe mampiseho ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina" izy ireo, alohan'ny hanakalozana fahitana samihafa amin'izay mety ho fanaingoana.
Fanamby olona 1: Ny haavon'ny fanamarinam-baovao sy / na ny famerenan'ny mpiara-miasa izay efa nomanina ny fiomanana dia tokony hampitaina tamim-pahamarinana raha vao tonga ny fidirana amin'ny fanavaozana.
Na dia nifanaiky aza izahay fa ny taratasim-baovaon'ny famoahan-dahatsoratra sy ny famerenana ny fanomanana amin'ny fanavaozana dia tokony ampitaina mangarahara, dia tsapanay avy hatrany fa manana fahitana samihafa izahay mikasika ny dikan'ny fangaraharana amin'ity toe-javatra ity. Zava-dehibe ny ijerentsika ny filan'ny mpamaky sy ny traikefa: ny mpikaroka iray izay mikaroka tsy maheno dia mety mila mahafantatra ny haavon'ny fandinihana efa niomanana (tsy misy? Mialoha ny fandinihana mialoha ny fanarahana ny fangatahana etika sy ara-dalàna ary ara-tsiansa. relevance? Ny ambaratonga lalina kokoa ny famerenan'ny mpiara-miasa?), raha ny mpikaroka izay mikaroka lalina ao amin'io lohahevitra na fomba fikarohana io dia mety mahita ny fanehoan-kevitra momba ny fandinihana sy ny tantaran'ny fizarana. Ny fampahalalana sasany, toy ny fihemorana, dia tokony hampitaina mazava amin'ireo mpamaky rehetra. Ho an'ny fikarakarana mahomby dia ho zava-dehibe ihany koa ny fampahalalana momba ireo taratasim-panamarinana sy famerenana alaina amin'ny alàlan'ny scam metadata voafaritra tsara sy ekena. Ahoana anefa no ahafahana angon-drakitra an-tsokosoko manerana ireo mpizara atosaina? Ny fizotran-kevitry ny fanaovan-gazety sy ny fizotran'ny famoaham-baovao amin'izao fotoana izao dia miovaova eo anelanelan'ny diary sy ireo mpizara fanomanana, ka hatraiza kosa no ahafahantsika mamolavola ireo fomba fiasa ireo?
Fanambarana avy amin'ny lehilahy 2: Tokony ho maimaimpoana foana amin'ny mpanoratra iray ny mametraka taratasy fanomanana.
Nanaiky isika fa ny fanomanana dia tokony ho afaka amin'ny fotoana ampiasaina.
Fanamby olona: Ny fanaovan-tsipika dia tsy tokony hampiasaina mba hamaritana ny laharam-pahamehana.
Raha ny tsara indrindra, tsy tokony ho lohahevitra ny laharam-pahamehana, saingy fantatsika fa, ao anatin'izao toe-draharaha fikarohana izao dia tokony hodinihina io resaka io. Vantany vao voapetraka ao amin'ny sehatry ny daholobe ny preprint dia napetraka ny laharam-pahamehana ara-tsiansa ny asa voalaza ao amin'ny preprint. Fantatsika fa ny zavamaneno ara-dalàna ankehitriny dia mety tsy hihetsika mifanaraka amin'izany: ohatra, ny lalàna momba ny patantitra amerikana dia mbola mametraka ny laharam-pahamehana mifototra amin'ny fametrahana ny fangatahana patanty, ary misy fampahafantarana ampahibemaso - amin'ny alàlan'ny preprint na fivoriana tsy ara-potoana - mety hanimba an'io. Ilaina ny fiheverana sy ny fahazavana bebe kokoa momba ny fomba fandefasana ny làlan-jotra misy ny présert miaraka amin'ny fangatahana laharam-pahamehana sy ny dikan'ny fahitana sy ny fananana ara-tsaina.
Fanambaràna olona 4: Ny mpizara mpanonta printy dia tokony ho agnostika ho amin'ny fitaovana sy havoana sy paompy ao ambany.
Raha te hampiasa takelaka araka izay tratry ny herin'izy ireo tanteraka, dia heverinay fa tokony hifanaraka sy tsy azo tanterahina ireo mpizara preprint amin'ny fitaovana sy fitaovana sy rindrambaiko avo lenta sy havoana, ary miaraka amin'izay koa, tsy miraharaha vaovao na tondro ho amin'ny fivoarana mivaingana, ny fenitry ny fiarahamonina ary ny sisa. Ohatra, ny fizotry ny fiakodia amin'ny fahazoana sy ny curate metadata dia mety ho sarobidy amin'ny fahitana. Ireo mpizara mpanomana ny fiarahamonina dia afaka manome torohevitra momba ny fomba fanao tsara indrindra ho an'ny fidiram-bolan'ny rano midina, manome lanja ny asa ary hanamora ny fampiasana sy fanampiana hafa.
Fanamby amin'ny lehilahy 5: Tsy tokony tohanan'ny mpamatsy vola sy mpanamboatra pôlitika ny mpizara fikarohana raha tsy hoe mampiseho ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina.
Inona no tiana holazaina amin'ny governemantan'ny vondrom-piarahamonina ary nahoana no manan-danja izany?
Noresahinay fa ny antony lehibe iray aorian'ny fanerena ny fotodrafitrasa notarihin'ny vondrom-piarahamonina dia ny fanamaivanana ny fahafahan'ny tombontsoa ara-barotra ho laharam-pahamehana noho ny tombontsoa amin'ny siansa, toy ny zava-nitranga tamin'ny fahaverezan'ny tompony sy ny fidirana amin'ireo sora-tanana nodinihin'ny mpinamana (avy amin'ny fiaraha-miasa) mba hahasoa ny mpitory ara-barotra. Eto dia mety hanontany isika hoe: ny tombotsoan'ny varotra ve no omena laharam-pahamehana amin'ny fizarana fahalalana sy fanamorana ny lahateny, ary ahoana no ahafahantsika antoka fa tsy izany no zava-misy amin'ny mpizara?
Ankoatra ny mpamily ara-barotra, niaiky izahay fa ny serivisy serivisy / mpamatsy fotodrafitrasa (mpamoaka, teknolojia) dia manao dingana sy famolavolana safidy izay misy fiantraikany amin'ny fitondrantenan'ny mpampiasa. Tsy natsangana izany ho fitsikerana - fa kosa, maro taminay no nanaiky fa ny fihetsiky ny mpikaroka isam-batan’olona dia matetika tarihin'ny filàn'ny tsirairay avy hatrany fa tsy tombony miaraka, noho ny tsindry sy fanerena ny tontolo iainany ao anatiny. Ny olona miasa amin'ny orinasam-pamoahana dia mitondra fahaiza-manao sy fahaiza-manao amin'ny matihanina amin'ny famoahana ny siansa izay mifameno amin'ny mpanitsy akademika, mpandinika ary mpanoratra. Ny fanontaniana dia ny fomba ahafahana miantoka ny fizotran-javatra sy ny fisafidianana ny fika mifanaraka amin'ny izay hahomby indrindra amin'ny vatsim-pianarana.
Noresahinay ny fomba tsy ahitan'ny mpihazakazaka iray misolo tena ny mahasoa indrindra amin'ny siansa, ary tsy misy koa vina tokana momba ny fomba hahatratrarana tsara indrindra. Moa ve ny fandrosoana ny fitomboan'ny mpizara manokana iray ho tombony ho an'ny vondron'olona iray manontolo? Sa tokony horaisina daholo ny fanapaha-kevitra rehetra ho tombontsoan'ny ivotoerana? Iza ny votoatiny tokony hojerentsika, ary ahoana no ahafantarantsika hoe iza no atokisantsika? Amin'ny fomba ahoana no andraikitry ny fizotran'ny fanapahan-kevitra ho an'ny vondrona iray manontolo? Nasainay tamina fahatakarana iraisana ireo fanontaniana ireo fa maro ny diary miasa ho fiaraha-miasa eo amin'ny mpikambana ao amin'ny vondron'olona akademika sy ny mpamoaka boky, ary misy ireo mpizara sasantsasany (toy ny bioRxiv) no miasa ao anatin'io andalana io. Na izany aza, na ahoana na ahoana no fomba fiasa dia tsy mangarahara, ary ny tsy fisian'ny fangaraharana dia mety ho ny ivon-toerana lehibe indrindra rehefa matoky fa ny fanapahan-kevitra dia natao ho tombontsoam-bokatra. Ny fandaozana ny fanapahan-kevitra hoe iza no matoky ny mpamatsy vola na mpanamboatra pôlitika dia mety tsy hita taratra izay tian'ny vondrom-piarahamonina malalaka kokoa.
Noho izany, ahoana no fomba handraisana fanapahan-kevitra amin'ny mpizara preprint amin'ny fomba izay itokisan'ny vondrom-piarahamonina malalaka kokoa. Nandinika ohatra hafa momba ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina izahay - na izany no ifandraisana amin'ny fanapahan-kevitra na ny tompon'andraikitra amin'ny fanapahankevitra amin'izy ireo, indrindra fa ny fanamorana ny fanapahan-kevitra entin'ny tombontsoa ara-barotra. Ny mekanika iray dia ny fametrahana fangatahana misokatra ho an'ny fanehoan-kevitra (RFC; ohatra, jereo https://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment) ka izay misy afaka manome ampidirina. Na izany aza, mila misy dingana mangarahara sy mangarahara hanapa-kevitra hoe iza no hampidirina, ary ekena fa tsy miantoka valiny tsara kokoa ireo dingana ireo. Raha tsy izany, ny tetikasa dia mety hampiasa mekanika mba hihainoana ny mpandray anjara samihafa: ohatra, ny ekipa ao ambadiky ny Eropa PMC dia mihaino ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fikarohana momba ny vokatra, amin'ny akademika amin'ny alàlan'ny tabilao mpanoro hevitra ara-tsiansa, ary amin'ireo mpanamboatra pôlitika amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa mpamatsy vola. Ity dingana farany ity dia afaka manome ny dingana vita amin'ny fanapahan-kevitra milamina, fa tsy mora tarihin'ny tompon'andraikitra iray (toa ny rehetra misolo tena ny varotra ara-barotra), fa mety hamatsy vola amin'ny lafiny fitantanana.
Ny fihetsiky ny mpampiasa dia misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra ara-tsosialy sy teknolojika natao tamin'ny ambaratonga fotodrafitrasa, koa ny fomba fampandehanana ny mpizara pretra ary amin'ny alàlan'izany dia handray anjara amin'ny fahitana ny fiomanana amin'ny biolojia amin'ny farany. The Nanohy ny fifanakalozan-kevitra an-tserasera aorian'ny fisakafoanana.
Azontsika atao ve ny mametraka fahitana mizara fiomanana amin'ny fanomanana amin'ny biolojia?
Ny traikefa ananantsika, ny fizaran'ny fahalalana sy ny soatoavina dia misy fiantraikany amin'ny zavatra nomanintsika tsirairay ho avy sy ho lasa: amin'ny fanampiana ny vokatra hozaraina ara-potoana, hanakorontanana ny orinasa famoahana ara-barotra ankehitriny.
Ny latabatr'i Emmy dia niresaka ny momba ny fisafotofotofotofotofototra ao anaty ny preprint (ary ny tsy misy) mitondra olana rehefa mamorona fitaovana, politika ary fotodrafitrasa ho azy ireo. Miaraka amin'ny tranga fampiasa isan-karazany ho an'ny fanomanana, ary raha ny vondrom-piarahamonina maniry ny hizara ireo famoahana fikarohana mialoha ny famoahana azy dia nanolorana ny fanetanana ny famaritana ny fiomanana amin'ny "sora-tanana vonona ho an'ny publication journal" dia afaka hanamora ny fampivoarana teknolojia, ny fifandraisana ary ny asa fisolokiana. Ireo mpizara an-tserasera dia hanana tanjona tokana amin'ny trano sy serivisy fanomanana. Mety tsy hisarika ny fampiasana ny tranga rehetra amin'ny fanamboarana izany, saingy hita ho tombam-barotra mendrika ho an'ny fampitomboana ny fananganan'anaka amin'izao fotoana izao. Na izany aza, teo amin'ny latabatr'i Naomy, nanolo-kevitra izahay fa mety ilaina ny mangarahara momba ny fahitana sarotra sy / na fahitana fanitsiana ho fanovana, mba tsy hihoarana ny fandrosoana raha vao azo antoka ity famaritana tsotra ity.
Ny tena zava-dehibe dia noresahinay ny momba ny ahiahantsika momba ny fanomanana, indraindray misy toe-javatra maminavina ny tsy te hahita zavatra milamina:
Mety tsy maimaimpoana maimaim-poana foana ny mpanonta printy, miankina amin'ny modely ara-bola ampiasaina amin'ny fitazomana ny fotodrafitrasa fanavaozana - nisy ny fampitandremana momba ny fomba fisokafan'ny hetsika misokatra any Etazonia sy Eropa amin'izao fotoana izao. fiampangana fanodinana (APC) handoavana ny fidirana malalaka. Ity dia mety ho ny fomba andoavam-bola no andoavam-bola raha tsy misy safidy hafa, toy ny fanampiana mivantana ataon'ny mpamatsy vola sy andrim-panjakana (ohatra, amin'ny alàlan'ny tranomboky).
Amin'ny alàlan'ny fanomanana azo am-pahibemaso, ahoana raha toa ka diso izy ireo na diso ny hevitr'izy ireo? Ahoana raha miparitaka toy ny "vaovao sandoka" ny siansa diso? Niresaka momba ny fomba ahafahan'ny vondrona marary sasany manakiana ny literatiora tsy misy fanabeazana siansa ofisialy ary ny fijerin'ny mpiara-mianatra dia tsy manome antoka ny marina. Ny fanolorana ny mpamaky mangarahara sy fampahalalana bebe kokoa momba ny hoe ary ahoana no hanampian'ny fanampiana ny fomba nodinihin'ireo manam-pahaizana hafa.
Mety tsy hanelingelina ny vatsim-pianarana ireo vinavina - mety mbola hiasa eo amin'ny tontolo iray izay tsy idiran'ny haingana sy misokatra ary mitovitovy ny famokarana sy ny fampiasana fahalalana. Mety ho hita ankehitriny izany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fiomanana hilazana fa laharam-pahamehana ny fahitana nefa tsy tafiditra ao amin'ny databeta miorina, ary amin'ny alàlan'ny fanontana boky-na fampitana an-tsoratra izay ahafahan'ny mpanoratra maneho azy ireo dia nandalo ny dingana fitsapana tao amin'ny marika an-gazety miaraka amin'ny laza malaza .
Ny sehatry ny mpamoaka boky dia mety hiteraka fidirana, satria asehon'ny mpanoratra ny fiomanana ao amin'ny lampihany ary avy eo dia nasaina hijanona ao anatin'ireo fantsom-baovao jeren'ny mpamoaka azy.
Niresaka vetivety momba ny fampiasana loharanom-pifandraisana hisokatra ahazoana tombony isika: mila miaro amin'ny fitrandrahana ara-barotra ve ny fanomanana amin'ny alàlan'ny fampiasana fehezan-dalàna momba ny fahazoan-dàlana, toy ny fizarana (-SA)? Angamba tsy: ny andrana tombony amin'ny harena misokatra dia mety tsy ho olana, raha manaiky ny fiarahamonina fa ny tombontsoa amin'ny fisokafana dia mitohy mihoatra ny fanararaotana, toy ny hita amin'izao fotoana izao.
Ka inona no tianay ho hitanay? Nofarananay tamin'ny fizarana ny fahitana manokana ho an'ny fanomanana, ao anatin'izany:
Ny toerana lehibe amin'ny fanapariahana fikarohana, amin'ny fotoana voatokana, dia malalaka ho an'ny mpanoratra sy ny mpamaky, ary ny fomba famerenan'ny mpinamana no jerena. Ity fandinihana namana ity dia mety ho fiaraha-monina; mety mahomby kokoa sy ara-potoana kokoa izany rehefa ilaina izany, ohatra mandritra ny fihanaky ny areti-mifindra. Ny fanamarinana sy ny fanamafisana ny preprint dia mety miova rehefa mandeha ny fotoana, ary ny fanaovana fanontana dia ahafahana mamotopototra ny tantara manontolo.
Ny firaketana an-tsoratra momba ny lahateny siantifika izay loharanom-pianarana hianarana ekena sy / na fomba fanao voafidy, ao anatin'ny fifehezana (ohatra, ny fomba statistika mety ampiharina amin'ny fanandramana fanandramana) na bebe kokoa (ohatra: ny fomba ho fanamboarana) famerenan'ny mpiara-miasa sy mpanoratra tompon'andraikitra).
Manohana ny fandrosoana haingana sy tsara kokoa amin'ny fitsaboana, indrindra amin'ny tontolo izay nanatsara ny fiainany ny marary tamin'ny fanodinana ireo teknolojia ara-pitsaboana (ohatra #WeAreNotWaiting) na mampiseho ny porofon'ny mpitsabo azy ireo avy amin'ny literatiora.
Fiara iray izay ahafahan'ny mpikaroka mampifandray sy miditra amin'ireo mpihaino hafa (marary, mpanao politika), ary mianatra ny fomba hanaovana izany tsara.
Fomba iray hanabeazana ny fahalalana ary hampiasaina mba hitoviana kokoa sy ao anatiny, ohatra, amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fahitana ny mpikaroka manerana an'izao tontolo izao (toy ny manao ny AfricaArXiv sy ny hafa ho an'ny mpikaroka ao na avy any Afrika).
Fiara iray ho an'ny lahateny manampahaizana tsy mila fanatrehana olona an-dresaka mandritra ny fihaonambe, mampihena ny fampiasana ny fiaramanidina fiaramanidina ary hialana amin'ny fidirana amin'ny alàlan'ny vidin-javatra, ny olana visa ary ny antony hafa manala baraka.
Mandrosoa mankany, ny soso-kevitra dia ny hampiditra feo isan-karazany amin'ny fifanakalozan-dresaka, manome fahaiza-misaina bebe kokoa, mamorona vina marimaritra iraisana ho an'ny ho avin'ny fanomanana, mamolavola torolàlana tsara indrindra ho an'ireo mpizara mpamboatra, ary hanome vaovao sy fanazavana ho an'ny mpampiasa azy ireo hanampiana azy ireo hisafidy (amin'ny alàlan'ny hetsika) ny ho avy maniry ho tazana.
Inona ny ho avy maniry ho jerena? Manasa anao izahay hiresaka momba izany amin'ny mpiara-miasa aminao ary hamela fanamarihana ny dika tany am-boalohany tamin'ity lahatsoratra ity.
Sokajy:	Open AccessPreprintPublishing
Legioma afrikanina AfricaOSH ASAPbio Berlin capacity building Ivotoerana ho an'ny siansa misokatra amin 'ny Conference Crastina Discoverability DIYbio Edinburgh Sakafo ara-tsakafo FORCE11 FORCE2019 IGDORE fiteny fiteny samihafa fomba fahafahana misokatra Safidy fidirana malalaka Misokatra ny Sarintany Fahalalana misokatra siansa Conference Conference Open Open Framola momba ny siansa misokatra Open Hardware Hardware osc2018 fiaraha-miasa Voahangy Ihuoma Osirike Peer Review preprint famoahana ScienceOpen Scientific Writing saram-panompoana siansa ara-tsosialy maharitra TCC Africa fiofanana ubushakashatsi
ScienceOpen sy AfricaArXiv dia miara-miasa amin'ny fanomezana afrikana mpikaroka afrikanina haingana, ny tambajotra ary ny fiaraha-miasa. Ny sehatra fikarohana sy famoahana ScienceOpen dia manome serivisy sy endri-javatra mifandraika amin'ny mpamoaka, andrim-panjakana ary mpikaroka, ao anatin'izany ny atiny Hamaky bebe kokoa…